शेष घलेको मासिक मोबाइल खर्च चार हजार डलर : नया पत्रिका | Sima Pari
Home / PaperPublished / शेष घलेको मासिक मोबाइल खर्च चार हजार डलर : नया पत्रिका
शेष घलेको मासिक मोबाइल खर्च चार हजार डलर : नया पत्रिका
Posted by: admin in PaperPublished 1 Comment
१८ वर्षदेखि अस्ट्रेलिया बस्दै आएका शेष घले विदेशमा थातथलो बनाएका नेपालीहरूको संगठन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष छन् । अस्ट्रेलियामा शिक्षा र सपिङ मल क्षेत्रमा लगानी गरेका घले आक्कलझुकल नेपाल आउने जाउने गर्थे । एनआरएनए अध्यक्ष भएपछि भने महिनैपिच्छे नेपाल–अस्ट्रेलिया गरिरहेका छन् । प्रस्तुत छ, घलेसँग मोबाइल प्रयोगका अनुभवबारे गरिएको संवाद :
सुरुमा कुन मोबाइल प्रयोग गर्नुभएको थियो ?
नोकियाको सानो खालको मोबाइल प्रयोग गरेको थिएँ । अहिले त्यसबारे खासै याद छैन ।
अहिलेचाहिँ कुन मोबाइल बोक्नुहुन्छ नि ?
सामसुङ ग्यालेक्सी–३ र आइफोन बोक्छु ।
कति मूल्यका हुन् ?
ठ्याक्कै कति पर्‍यो भन्नेचाहिँ याद भएन । तर, सामसुङ ग्यालेक्सीको सात/आठ सय डलर मूल्य परेको हुनुपर्छ । आइफोनको पनि त्यस्तै हो ।
मोबाइलमा दैनिक कतिको कुरा हुन्छ ?
त्यति धेरै कुरा हुँदैन । सकेसम्म फोनमा धेरै कुरा गर्न रुचाउँदिनँ । तर, गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्व लिएयता फोनको प्रयोग बढेको छ ।
नेपाल र अस्ट्रेलिया कतातिर धेरै मोबाइल प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
स्वाभाविक रूपले नेपालमा धेरै प्रयोग गर्छु । अस्ट्ेरलियामा अफिसमा धेरै समय बित्ने हुँदा ल्यान्डलाइन प्रयोग गर्छु । तुलना गर्नैपर्दा नेपालमा हुँदा दैनिक ६ घन्टाजति फोन प्रयोग हुन्छ भने अस्ट्ेरलियामा दुईदेखि तीन घन्टाभन्दा बढी हुँदैन । एनआरएनएको अध्यक्ष भएयता अन्तर्राष्ट्रिय कल गर्नुपर्ने भएकाले फोनको प्रयोग बढ्दै गएको छ ।
नेपाल र अस्ट्रेलिया छँदा मोबाइलमा कुन सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
नेपालमा एनसेल प्रयोग गर्छु भने अस्ट्ेरलियामा टेल्स्ट्रा सिम प्रयोग गर्छु ।
मोबाइलमा कति खर्च हुन्छ ?
पहिले महिनामा दुई/तीन सय डलर जति खर्च हुन्थ्यो अस्ट्ेरलिया रहँदा । अहिले चाहिँ कति खर्च भइरहेको छ भन्ने ध्यान दिएको छैन । तर, एनआरएनएको अध्यक्ष भएयता मोबाइलको खर्च भने बढेकाले महिनामा तीन–चार हजार डलर जति खर्च हुन्छ होला । अध्यक्ष भइसकेपछि संसारभरका साथीलाई फोन गर्नुपर्छ ।
कसले मोबाइलमा बढी फोन गर्छन् ?
मेरो मोबाइलमा परिवार, इष्टमित्रको फोन तुलनात्मक रूपमा कम आउँछ । अहिले एनआरएनसम्बन्धी फोन धेरै आउँछ । ग्लोबल नेटवर्क भएकाले पनि एनआरएन साथीहरूसँग धेरै कुरा हुने गरेको छ ।
मोबाइलमा धेरै के चलाउनुहुन्छ ?
मैले बोकेको स्मार्टफोनमा अनेक खालका फिचर छन् । जे चलाए पनि अनलिमिटेड छ, तर यो भन्दैमा धेरै मोबाइल खेलाउने गरेको छैन । मोबाइलमा खासगरी इमेल चेक गर्छु । मेरो अफिसियल फाइल यसैमा राखेको छु । इन्टरनेट पनि मोबाइलबाटै चलाउँछु । आइप्याडचाहिँ धेरै प्रयोग गर्छु । त्यसैमा मेरा धेरै फाइल हुन्छन् । आइप्याड आधा घन्टासम्म हेरिनँ भने केके न भएजस्तो खुलदुली लाग्छ ।
अहिलेसम्म मोबाइल हराउनुभएको छ ?
धेरैपटक हराएको छु । तर, हराएका फोन पाउने पनि गरेको छु । एकपटक सिंगापुरको टयाक्सीमा मोबाइल छाडेछु, पछि अस्ट्ेरलिया पठाइदिएको थियो । त्यस्तै, युके (बेलायत)मा पनि एकपटक हराएको मोबाइल अस्ट्ेरलिया पठाइदिएछन् ।
Previous: सभासद्‌द्वारा पद तथा गोपनीयताको सपथ
Next: रानी एलिजबेथ आफ्नो राजकीय अधिकार युबराज चार्ल्सलाई सुम्पदै
bholi dekhi , sesh ghale le hageko muteko sabai jokhera lekhnu hai sampadak jyu.